सरकार जिम्मेवार बनोस् – Chitwan Post
मुलुक अहिले कोरोना भाइरसले आक्रान्त भैरहेको छ । दिन दुई गुना रात चौगुना संक्रमितहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । सुरूतिर एक–दुई जना पोजेटिभ भेटिँदा ओहो लौ बर्बाद भो भनिन्थ्यो, अहिले दिनहुँ २०० को हाराहारीमा संक्रमितहरु भेटिन थालेका छन् । इन्डियाबाट नेपालीहरुलाई कुकुर धपाएसरी धपाइएको छ, बोर्डरमा हजारौँ नेपालीहरु भोक, रोग र शोकले लम्पसार छटपटाइरहेका छन् ।
अझ तेस्रो मुलुक साउदी, कतार, मलेसिया जहाँसुकैबाट नेपाली क्वारेन्टाइनको बहानामा भोकभोकै अलपत्र मिल्किएका छन् । स्वदेश फर्कूं भने यहाँ सोत्तर परिन्छ भनेर विदेशिएका नेपालीलाई सरकारले नेपाल ल्याउने तयारी गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर यही बेलामा इन्डियाले नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र हड्पेको छ । त्यससँगसँगै नेपालका सबैजसो सिमानाहरुमा नेपाली भूमि भारतीयद्वारा खोसिएको, हड्पिएको छ । कतै जंगे पिल्लर सारिएको छ भने कतै आफ्नो प्रहरी पोस्ट बनाउन सेना तैनाथ गरिरहेको छ ।
सरकारले जनताको ठूलो विरोध भैसकेपछि बल्लबल्ल कालापानी र लिपुलेक नेपालमा पर्ने गरी नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । अब नेपाली अतिक्रमित भूमि कहिले नेपालले फिर्ता पाउने वा नपाउने हो ठेगान छैन । भारत हाम्रै हो कालापानी भनी दाबी गरिरहेको छ । उत्तरतिरको खबर पनि राम्रो छैन । नेपालको सगरमाथा चाइनाले हाम्रो हो भनिरहेको हल्ला चलाइरहेको छ ! यही बेलामा पाकिस्तान र भारतीय फाँटहरुमा सलह आएको र खेतीपाती, अन्न, फलफूल बारीमै सलहले खाई सखाप पारिदिएका समाचार सुनिन थालेको छ ।
हाम्रो देशको सरकार अर्थात् मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री फेर्न यो भएन त्यो भएन, यो पार्टीले यस्तो ग¥यो त्यसले त्यस्तो ग¥यो, राजा आउने भयो जस्ता अनर्गल किचलो र कलहको आगो भित्रभित्र राम्रैसँग सल्किइरहेको छ । चौतर्फी समस्याको पहाडैपहाडले थिचिरहेको दुःखद परिस्थितिमा राजनेताहरु एकआपसमा चुपचाप आफ्नो जिम्मेवारी एकदमै मिलेर सबैले सबैलाई सम्मान गर्दै एकढिक्का भई देश र जनताको प्राण बचाउन जरूरी भएको बेलामा झन् उल्टाउल्टा कर्म, दोषारोपण, भ्रष्टाचार, आफ्नै मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्ने हरकत सरकार चलाउनेबाटै ठाडै हाकाहाकी भैरहेको छ । यी सबैको जिम्मेवार को हो ? कसले देशको अहिलेको समस्यालाई किनारा लगाउन सक्छ ? यी नै आजका गम्भीर प्रश्न हुन् ! वास्तवमा जिम्मेवार पदमा बसेर काम उल्टो गर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने तर गर्नुपर्ने काम नगर्ने, दोष लगाएर उम्कन खोज्ने चिन्तन राष्ट्रकै निम्ति घातक हुन्छ ।
एमसिसी वास्तवमा के हो ? यो किन चाहियो ? बाहिर पत्रपत्रिकाहरु र अभियन्ताहरुले भनेजस्तै एमसिसीबाट देश पराधीन र बर्बाद भयो भने जबाफदेही को हुन्छ ? फेरि भ्रष्टाचार र भड्खालोमा हुइँक्याइदिने नेताहरु एमसिसी भनेर मरिहत्ते र कोकोहोलो किन गरिरहेका छन् ? के देश डुबाएर एक–दुई जना टाठाबाठालाई मोज हुने कुकर्म सफल हुन दिन नेपाली जनताले हुन्छ ? कदापि हुँदैन ।
अहिलेको कोरोना नियन्त्रण, कालापानी सिमाना विवाद, सलहको खतरा, रोग–व्यथा, नेपाल आउन चाहेका विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याई स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार सिर्जना गर्न अहिलेको वर्तमान केपी ओली सरकार सम्पूर्ण पक्षलाई मिलाएर एकढिक्का पारी जनताको इच्छाबमोजिम भ्रष्टाचार नगरी सुध्रेर लागोस । यो मात्र एक अन्तिम अवसर छ, होइन भने मान्छे बदलिन सक्दैन, पुरानै ढर्रा, ढिलोचाँडो मह¤वपूर्ण काम नगरी फाल्तु र गौण काममा अल्याङ्मल्याङ गरिरहने हो भने देश, व्यवस्था र नेपाली जनतामाथि ठूलो सङ्कट आउने खतरा देखिएको छ ।
समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारप्रमुखहरुले छिटोभन्दा छिटो ठूलो छाती, सकारात्मक सोच लिई नेपाली जनता सम्पूर्णलाई आफ्नै छोराछोरीझैँ प्रेमपूर्वक जिम्मेवार भई संयमित होऊन् । नेपाल सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग डटेर वार्ता गरोस्, भारतले हाम्रो लुटिएको भूमि फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्याय खोज्न सरकार तुरून्तै जाओस् । विदेशिएका नेपालीहरुलाई सुरक्षित तरिकाले नेपालमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राखी स्वस्थ खाना, बासको उचित व्यवस्था गरोस् ! लकडाउनलाई परिस्थिति हेरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह गरोस् ! खान नपाएका, डेरा र सडकमा गुजारा गर्नुपर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई देसवासीका नाउँमा राहत आह्वान गरी तत्काल बाँच्न सक्ने वातावरण नेपाल सरकारले निर्माण गरोस् ।